Komity mpihevi-draharahan’ny Leader Fanilo : “Tsy ara-dalàna ny fiantsoana hoe hanao filankevitra nasionaly” | NewsMada
Komity mpihevi-draharahan’ny Leader Fanilo : “Tsy ara-dalàna ny fiantsoana hoe hanao filankevitra nasionaly”
“Tsy ara-dalàna io, fa efa naato ny birao nasionaly mpandrindra teo aloha. Raha tsy manana ny zo sy fahefana mamory ny Leader Fanilo, nefa miteny amin’ny anaran’ny antoko: fisolokiana goavana izany, famitahana mpikambana.”
Izay ny fanazavan’ny avy amin’ny komity mpihevi-draharaha eo anivon’ny Leader Fanilo, Lalaina Berthnes, teny Antaninandro, omaly, momba ny hoe fiantsoana filankevitra nasionaly hatao anio. Notsiahiviny fa nampiatoana ny mpikamban’ny birao nasionaly mpandrindra ny famadihana palitao, tsy fanajana ny etika politika sy ny satan’ny antoko…
Ho an’ny any amin’ny faritany, filankevitra nasionaly vonjimaika no hoe hatao, anio; ho an’ny eto Antananarivo, fifampiarahabana noho ny taona vaovao. Tsy manana fahefana intsony hiteny amin’ny anaran’ny Leader Fanilo ny birao nasionaly mpandrindra teo aloha. Raha mbola manao izany izy ireo: mamitaka mpikambana, misandoka anarana sy andraikitra.
30 andro mialoha ny fiantsoana filankevitra nasionaly
Eo am-panomanana ny filankevitra nasionaly ny komity teknika. Tsy maintsy 30 andro mialoha ny fandefasana ny fiantsoana mpikambana amin’ny filankevitra nasionaly, araka ny fanazavany. Ny antony, tsy mamoaka ny teniny na hevitry ny solontena handray anjara amin’izany. Mitondra ny hevitry ny mpikambana ifotony any amin’ny misy azy avy ireo solontena hanatrika ny filankevitra nasionaly.
Mila vorina ny mpikambana any ifotony amin’izany, ary tsy maintsy ao anaty fiantsoana ny fandaharam-potoana amin’ny filankevitra nasionaly. Mba hahazoany mpikambana mifampidinika sy mampitondra ny heviny isaky ny lohahevitra tsirairay dinihina amin’ny filankevitra nasionaly.
“Tsy fitapitahina ny mpikambana, fa tsy vakivaky ny Leader Fanilo rehefa hanolo mpitondra”, hoy izy. Nomena andraikitra ny mpitondra ny antoko, azon’ny mpikambana hamoahana ny safidiny hoe aato izy ireo amin’ny filankevitra nasionaly, rehefa tsy manaja ny fitsipika sy andraikitra nomena azy. Amin’izay vao tena hilamina?